« Herinandron’ny Havatsa »: hotsarovana manokana i E.D Andriamalala | NewsMada
« Herinandron’ny Havatsa »: hotsarovana manokana i E.D Andriamalala
Andrarezin’ny asa soratra ! Emilson Daniel Andriamalala, ilay anarana nahafantarana azy. Tsy holalovam-potsiny ny faha-100 taony fa homarihina manokana ao anatin’ny « Herinandron’ny Havatsa »…
Hiompana amin’ny faha-100 taon’i Emilson Daniel Andriamalala (poety, mpanoratra, akademisiana) ny lanonam-panokafana ny « Herinandron’ny Havatsa », ny 22 oktobra izao, eny amin’ny lapan’ny Akademiam-pirenena malagasy, eny Tsimbazaza. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana amin’izany ny famelomana ny asa sorany hotontosain’ny Havatsa-Upem. Hira sy antsa miaraka amin’ny fianakaviana Andriamalala. Velakevitra « Emilson Daniel Andriamalala sy ny asa sorany », atolo-dRajaonesy Beby Vololona, mpampianatra mpikaroka sy Randriantsimiala Nanoina.
Raha tsiahivina, Andriamalala Emilson Daniel Tsiferana ny anarany. Teraka ny 22 oktobra 1918 tao Toamasina i Emilson Daniel Andriamalala (feno 100 taona amin’ity taona 2018 ity).
Nanambady an-dRamialinoro Lalasoa Berthe izy. Niteraka 13 mianadahy izy ireo, dimy lahy sy valo vavy, ka ny roa amin’ny lahy sy ny telo amin’ny vavy no efa maty. Ny 25 mey 1979 no nodimandry teny Itaosy ity andrarezin’ny asa soratra malagasy ity.
Poety sady mpanoratra andrarezina…
… Satria saika nikorisan’ny peniny avokoa na ny tantara foronina, ny sombin-tantara, tantara filalao an-dampihazo, sns. Anisan’ny tena nahalala an’i Emilson Daniel Andriamalala ihany koa ny mpianatra satria tafiditra tao anatin’ny fandaharam-pianarana ny boky nosoratany, toy ny « Ilay vohitry ny nofy ». Nahasarika mpamaky marobe ihany koa ny « Fofombadiko » ny « Zazavavindrano », sns.
Anisan’ny nampiavaka ity mpanoratra ity ihany koa ny nanoratany lahatsoratra famakafakana momba ny teny malagasy. Tao ny « Ohatra sy hoatra » (Fanasina, 1968), ny « Teny iray hatrany ny pasifa » (Vaovao,1968) ny « Ny faingo mihantona » (Dingana, 1969), ny « Haisoratra sy Tsiky » (Hehy, 1971), sns.